Garsoore Milyaneer ah ka mid ah Garsoorayaasha Koobka aduunka 2018? | Shabakada Qalinkacayaaraha.com
Garsoore Milyaneer ah ka mid ah Garsoorayaasha Koobka aduunka 2018?
(08-07-2018) Mid ka mid ah Garsoorayaasha dhex dhexaadinaya Cayaaraha Koobka aduunka Gaar ahaan qabtay Kulankii Wareega Sideed dhamaadka dhex maray dalalka England iyo Sweden ayaa lagu sheegay in uu yahay Milyaneer haysta lacag aad u fara badan.
Bjorn Kuipers waa Garsoore 45 Sano jir ah kasakoow Xirfada Garsoore Kubada cagta ah waxa uu leeyahay Ganacsi hanaqaaday oo ay ka soo gasho lacag aad u fara badan oo faa iido waxaana uu u dhashay dalka Holland waana meesha uu ku leeyahay Gganacsiga.
Ninkaan ayaa waxa uu leeyahay Supermarketka Caanka ah ee lagu Magacaabo Jumbo kaas oo ku yaala Magaalooyin fara badan oo dalka Holland ah waxaana ka soo gala Sanad kasta lacag kabadan £11.5million taas oo ka dhigtay in uu Noqdo Milyaneer lacag aad u fara badan haysta.
Kuipers ayaa ah wiil uu dhalay Garsoore Kubada cagta ah oo Caan ka ahaa dalka Holland waxaana uu u doortay in uu Noqdo Garsoore in uu buuxiyo booskii aabihii isaga oo qaatay laysinka FIFA Sanadkii 2009 kii.